808nm 8W 200um Multimode Fiber Diode Laser ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - Box Optronics
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > Fiber Coupled Lasers > High Power Diode Lasers > 808nm 8W 200um Multimode Fiber Diode Laser
808nm 8W 200um Multimode Fiber Diode Laser သည် CW output 8m watts ဖြင့် 200 μm fiber မှရရှိသည်။ ၎င်းတို့သည် Fabry-Perot တစ်ခုတည်းထုတ်လွှတ်ကိရိယာများဖြစ်သည်။ ဤထုတ်ကုန်စာရင်းတွင်ရည်ညွှန်းထားသောမော်ဒယ်မှာ ၀.၂၂ ၏နံပါတ် aperture ရှိသည်။ သင့်နမူနာသို့မဟုတ် fiber cladding layer နှင့်တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ရန်အတွက် fiber ကိုအဆုံးသတ်သည်။ 915nm 10W စီးရီး multimode pump module များသည်လေဆာရောင်ခြည်ကိုဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့်အပူအရင်းအမြစ်ကိုဖြန့်ဝေပေးခြင်းဖြင့်မြင့်မားသောတောက်ပမှု၊
808nm 8W 200um Multimode Fiber Diode Laser ၏အကျဉ်းချုပ်
808nm 8W 200um Multimode Fiber Diode Laser ၏နိဒါန်း
808nm 8W 200um Multimode Fiber Diode Laser ၏ထူးခြားချက်များ
8W Output ပါဝါ;
4. 808nm 8W 200um Multimode Fiber Diode Laser အသုံးပြုခြင်း
808nm 8W 200um Multimode Fiber Diode Laser ၏ Electro-Optical လက္ခဏာများ (T = 25â„)
operating output ကိုပါဝါ Pout 8.0 - - W
ရောင်စဉ်တန်း width ကို FWHM @ Î” Î» - 3.0 7.0 nm
လက်ရှိ Threshold ဟုတ်တယ် - 1.8 - A
Pout မှာလက်ရှိလည်ပတ် IOP - 9.5 10.5 A
Pout တွင်လည်ပတ်နေသောဗို့အား VOP - 1.8 2.0 V
Beam ကိုကိန်းဂဏန်းအကျယ် (၉၀% ပါဝါ) NA - 0.15 - -
6. Package drawing & PIN-OUT အဓိပ္ပာယ် (ယူနစ် - မီလီမီတာ) ၏ 808nm 8W 200um Multimode Fiber Diode Laser
၇။ 808nm 8W 200um Multimode Fiber Diode Laser ကိုပို့ဆောင်ခြင်း၊ သယ်ယူခြင်းနှင့်အမှုဆောင်ခြင်း
hot Tags:: 808nm 8W 200um Multimode Fiber Diode Laser, ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ၊ လက်ကားရောင်းဝယ်ခြင်း၊ စက်ရုံ၊ စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်နိုင်ခြင်း၊